PinePhone KDE Nharaunda Yekutsikitsira ikozvino yawanikwa pre-odha | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki maviri apfuura, iyo KDE chirongwa uye PINE64 yakaita yepamutemo kuratidzwa kweiyo PinePhone KDE Yenharaunda Yekutsikisa. Uye kwemaawa mashoma, chero mushandisi anofarira anogona kutochengeta. Ini ndinofunga zvinoenda pasina kutaura kuti foni iyi ndeimwe yemapainiapple marangi anoshandisa iyo inoshanda sisitimu yakagadzirwa ne KDE, ndiko kuti, Plasma Mobile iyo inotiyeuchidza nezve izvo zvatiinazvo pamatafura, asi yakashandisirwa kubata zvidzitiro uye, mune izvi kesi, smartphone.
Is inowanikwa mushanduro mbiri, zvese zviri muchikamu chakashomeka, asi chimwe chazvo chinenge chiri chakajairika uye chimwe chiine chinoshandura package, inosanganisira yakawanda RAM (3GB), yekuchengetera (32GB), pamwe nechiteshi che USB-C chinotibvumidza kutora zvirinani kushandisa kwechigadzirwa, sekutsanangurwa kwazvino mu chigadzirwa webhusaiti.
PinePhone KDE Nharaunda Yenharaunda inowanikwa mune maviri mavhezheni
Zvine musoro, maviri maBhaibheri, achifunga kuti imwe inosanganisira zvimwe zvinhu zvemberi pane imwe, zvakare zvinoreva mitengo yakasiyana.
Zvakajairika: 2GB ye RAM uye 16GB yeMMC yekuchengetedza pa 149 $.
Yakatendeuka bundle: 3GB ye RAM, 32GB yeMMC yekuchengetedza, uye USB-C doc kwe $ 199.
Inowanikwa kubva Iyi link.
Panguva ino, isu tinofanirwa kurangarira zvakare zvatichange tichitenga kana tikatora imwe yeaya mafoni: smartphone iri parizvino muchikamu chekusimudzira, iyo ichatibvumidza kuti tiite zvakawanda, asi mune izvo isu tichawana akawanda bugs, saka hazvina kukodzera kuvaita foni yedu huru. Mune ramangwana zvese zvichavandudza, uye nezvimwe nerutsigiro rweAnbox iyo inosanganisira mafoni mazhinji neLinux, asi izvozvi izvi zvinofanirwa kutarisirwa.
En chinyorwa chedu rakaburitswa pakati paNovember mune iyo rondedzero ine zvirevo Yakazara, iko kunotsanangurwawo kuti inouya mune yepurasitiki kesi, chimwe chinhu chinonzwisisika kana tichifunga kuti iwo michina nemutengo uri pasi pe $ 200.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PinePhone KDE Nharaunda Yenharaunda inogona iko zvino kuchengetwa